उपेन्द्र यादव र गच्छदार मिल्दै ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
उपेन्द्र यादव र गच्छदार मिल्दै !
काठमाडौं, १३ वैशाख– स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा मधेसकेन्द्रित दलबीच एकता गर्ने होडबाजी चलेको छ । केही दिन अघि छ मधेशवादी दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेपछि मधेशको राजनीति गर्ने दलबीच एकता गर्ने र आफू शक्तिशाली बन्ने होड चलेको छ । राष्ट्रिय जनता दल बन्नु अघि उपेन्द्र यादवको पार्टीले नयाँ शक्ति पार्टीसित एकता गर्ने विषय पदका कारण तत्काललाई टरेको थियो । जब छ मधेशवादी दल मिलेर मधेशमा बलियो बनेको सन्देश दिए तब यादव दबाबमा परे । संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष यादवले आफूले भने अनुसार संविधान संशोधन नभइसकेकाले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग तत्कालै पार्टी एकता गर्ने मुडमा थिएनन् । भट्टराई संविधान बनाउने मध्येका प्रमुख व्यक्ति भएकाले तत्कालै मिल्दा मधेसीमा गलत प्रचार हुने डरका कारण तत्काल पार्टी एकताको पक्षमा थिएनन् । छ मधेशी दलको एकतासँगै मधेशमा बढेको धु्रवीकरणका यादव चेपुवामा परेका छन् ।
जब वैशाख ७ मा एकाएक ६ मधेसी दलबीच एकता भयो तब त्यसको भोलिपल्ट यादवलेउच्च नेतृत्वको पार्टी एकता तयारी समिति गठन गरे । जसमा भट्टराई र अशोक राईको नेतृत्वमा एकता तयारी समिति गठन भयो ।
यसैबीच यादवले आफुबाटै फुटेर बनेको फोरम लोकतान्त्रिकका नेता गच्छदारसँग पार्टी एकता गर्ने विषयमा छलफल चलाएका छन् । २५ सिटसहित संसदमा ठूलो बनेको राजपालाई साइजमा राख्नका लागि यादवले गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमसँग कार्यगत एकता गर्दै मिल्ने रणनीति लिएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकसँग संसदमा १७ सिट छ । यसका साथै उनले जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानलाई समेत आफ्नो पक्षमा जोड्न लागेका छन् ।
यस विषयमा यादवले गच्छदारसँग छलफल चलाइसकेका छन् । राजपा बनेलगत्तै यादव र गच्छदारबीच फोन संवाद भएको थियो । यसैबीच नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमले एउटै चुनाव चिन्हमा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेका छन् । यसको जानकारी दुवै दलले निर्वाचन आयोगमा गरिसकेका छन् । फोरमको नाममा दर्ता रहेको एक हातले मशाल समातेको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्वाचन आयोगमादुवै दल मञ्जुर रहेको निवेदन दिएका छन्।
‘शेरबहादुरजीलाई बृद्धभत्ता लिन किन हतार,७० बर्षको भइसक्नु भयो क्यारे’पाइहाल्नुहुन्थ्यो त’
काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारले जथाभावी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमालेले सरकारले […]